Okudingayo ukwazi ngokushisa okushisayo
Lapho ingane yakho ikhula, kunzima ukugcina ithrekhi yakhe. Unesithakazelo nakanjani konke: umshanelo ungabutha kanjani udoti, kungani inja inemphuzi emanzi, izwi likagogo livela kanjani emgodini wefoni futhi-ke, kungani ungamvumeli esitofu, futhi kusho ukuthini ukuthi "kushisa"? Ngokushesha, mhlawumbe, uzothola okuthile okushisayo, bese uthandaza kuNkulunkulu ukuthi ukujwayela kwakho kwaphela ngezinyembezi ezinemizuzu emihlanu kuphela futhi kukhishwa kancane. Kodwa zikhona izimo ezingathí sina - bese uzodinga ulwazi oluthile oludingekayo ukuze unikeze usizo lokuqala kumntanami. Ngakho, isihloko sesihloko sethu samanje sibi kakhulu: "Yini okudingeka ukwazi ngokushisa okushisayo? ".
Ukushisa okushisayo lapho, ngaphansi kwethonya lokushisa okuphezulu (isibonelo, umlilo oqondile, umshini oshisayo noma uketshezi, into ehamba phambili, ilanga, njll), izicubu zonakalisiwe. Yini okudingeka ukwazi ngokushisa okushisayo kumuntu ngamunye?
Okokuqala, ukuthi ukushisa okushisayo kuhlukaniswe ngamadirethi amathathu kuye ngokuthi iyiphi indawo enobungozi futhi wangena kanjani emathanjeni.
Kubalulekile ukwazi ukuthi izinga lokuqala lokushisa liwukulimala okuncane okubangelwa i-epithelium encane, kubonakala kuphela ngenxa yobomvu bendawo, kodwa kunzima kakhulu.
Ukushisa kwe-thermal kwesigaba sesibili kungena ngokujulile futhi kuthinta i-dermis, okungukuthi, isikhumba ngokwaso. Lapha ubuhlungu bubucayi kakhulu, futhi ngaphezu kokubomvu ezindaweni ezithintekayo, ama-bubbles nawo avela.
Isilinganiso sesithathu sokushisa siyingozi kakhulu, sithinta zonke izendlalelo zesikhumba, futhi sithinte nezinduku nezinsimbi ngaphansi kwesikhumba. Yingakho indawo yokushisa ingacabangi futhi idle, futhi ngezinye izikhathi inikeza umqondo wokuthi ibhaliswe.
Kodwa-ke, akwanele ukwazi konke mayelana nokushisa, usadinga ukwazi ukusebenzisa lolu lwazi, nakuba, isibonelo, akuwona wonke umzali angahlola izinga lokulimala kwengane yengane. Ngakho-ke, ukubizwa kukadokotela kuyadingeka. Nakuba ungahlukanisa i-degree yokuqala kusuka kwesithathu. Kunzima kakhulu ukuhlukanisa i-degree yesibili kusukela kwesithathu, ngakho-ke uma ungabaza, futhi ingane ishisa ngaphezu kwesandla sayo, bese ubonana nodokotela.
Okulandelayo, ngizokunika lezo zimo ezidinga ukwelashwa ngokushesha.
1. Uma ingane ishisa ngokwesithathu (ngisho noma incane kakhulu).
2. Uma ingane inomlilo wokushisa wesibili, obambe indawo yomzimba ofana nesandla somntwana.
3. Uma ingane inokushisa okuyi-1 okuyizingxenye ezithile zomzimba olingana no-10% wendawo yonke (isib. Isandla noma isisu).
4. Uma ukushisa kuthinta ubuso, okuhlangene (noma yikuphi), intamo, isandla, unyawo noma i-perineum.
Manje ake sikhulume ngosizo lokuqala onganikeza ingane yakho:
- Okokuqala okumele ukwenze ukuqinisekisa ukuthi ingane iphephile futhi isici esabangela ukushisa akuseyona eyingozi (uma ingane isesakhiweni esivuthayo - kubalulekile ukuyikhipha, uma ingaphansi kwemisebe yokukhanya - ukufihla, uma ngabe kukhona okuvutha kuyo - ukususa noma uthele amanzi kuwo uma kukhona okushisayo kakhulu kutholakala ezembatho zakho - ukuphumula noma ukuphumula izingubo ngokushesha);
- Uma ukushisa okushisayo kunesisindo esingu-1 noma 2 i-degree, kufanele kukhuphuke ngokuphuthumayo ngamanzi asebenzayo, kodwa iqhwa akufanele lisetshenziswe, kungcono ukugcina ama-temperatures ozimele ngama-12-18 degrees. Inqubo yokupholisa imayelana nemizuzu engu-20. Option, lapho indawo enokushiswa ifakwa emkhunjini ngamanzi okubi kunokuba amanzi ageleza;
- Ngemva kokuba usuhlilile indawo ethintekile, uyimboze ngokuhlanzeka, ugwetshwe emanzini apholile bese ugoqa ucezu lwendwangu;
- Uma ukushisa kungathí sina (i-3rd degree), akumele kubekwe ngaphansi kwamanzi kunoma ikuphi ! Kudingeka ngokushesha ukumboza le ndawo ngendwangu encane;
- Kodwa-ke, uma ungeke ukwazi ukucacisa: yiliphi izinga lokushisa, kungcono ukuhlala endaweni ethintekile yesikhumba ngaphansi kwamanzi abandayo;
- Nikeza ingane ethintekile ukukhulisa ubuhlungu kwengane;
- uma umntwana ethola ukushiswa kwezinyawo noma isandla, wabeka umunwe ngamunye emlenzeni ngendwangu emanqamu;
- susa izindandatho zamasongo namasongo, masinyane!
- ungabonakali amanzi ngokushisa okuyi-third-degree;
- uma izingubo ziboshelwe esikhumbeni - zama ukuzinqamula;
- Zama ukubhoboza amabhuleki;
- thinta indawo ethintekile ngesandla sakho;
- sebenzisa ucezu loboya bekotini, iqhwa noma izinto zokugqoka ezihlanganiswe emzimbeni (isibonelo, i-patch);
- zama ukuphatha utshwala nganoma yimaphi amafutha noma ukhilimu omuncu (i-kefir nekhilimu - lapha), zonke izinhlobo zamafutha okugcoba nama-creams, ama-lotions, ngaphandle kwe-case - umchamo noma i-powder ne-padded materials, i-iodine, i-zelenka, i-alcohol noma i-peroxide.
Uma usuvele wenza zonke izenzo ezidingekayo zokusiza usizo oluphuthumayo kwengane ethintekile ukushisa, kuzomele uhlole ngokucophelela isimo. Uma uqinisekile ukuthi indawo nokujula kokushisa kuhle futhi udinga ukushayela udokotela - ngakho-ke akukho isinyathelo esingeziwe esingadingekile, bonke odokotela bazokwenza. Kodwa-ke, uma isimo singesabi kakhulu futhi uqinisekile ukuthi ukushisa akuyona ingozi ecacile empilweni yengane, khona-ke ungazama ukuyiphatha ekhaya.
Kodwa-ke, kwenzeka ukuthi abazali bahlole isimo ngokungalungile futhi bakholwe ukuthi bayakwazi ukubhekana nokushisa, okuyinto, empeleni, kudinga ukuhlolwa kwezokwelapha. Ngakho-ke, uma ungakabizi udokotela futhi uphathwa ekhaya, udinga ukwazi izimpawu, ukubonakala kwazo ukuthi ukushisa kuyingozi kakhulu futhi ukuzithemba empilweni yakho kuyingozi ngisho. Lezi izimpawu:
1) ingane igula futhi ihlanza;
2) ukushisa komzimba okuphezulu kubonakala isikhathi eside (isikhathi esingaphezu kwezi-12 ezilandelanayo);
3) kudluliselwe usuku ngemuva kokushisa, kodwa ubuhlungu abukhiphi, kepha buqinisa;
4) kudlule usuku ngemuva kokushisa, kepha ukukhishwa kwesikhumba akunciphisi, kodwa kukhula;
5) ingane izwa ukuthi indawo eyonakalisiwe iminyene.
Ungaphathwa ekhaya. Kulesi simo, umthetho wokuqala uthi awukwazi ukuphazamisa indawo eyonakalisiwe: ukuyibopha nge-bandage futhi uhambe kaningi emoyeni omusha. Ngokushisa ukukhanya, izidakamizwa zesenzo zendawo (spray, aerosol) zingasetshenziswa. Uma izinga lokushisa liyesibili, kufanele udlulise imithi kokubili obomvu kanye ne-blisters, futhi uma okugcina kuvuliwe - kufanele uwafake ngokushesha ngamafutha okulwa ne-antibacterial ukuze ugweme ukuthola ukutheleleka.
I-Irritable Bowel Syndrome Ezinganeni
Indlela yokubona i-TB ngezigaba zokuqala zesifo ezinganeni
Imiphumela ephansi yokushisa
Kanjani kahle ukukhuluma nodokotela wezingane
Ukujula: indima yabo ekuphileni komntwana nokuzivocavoca
Ukubhula izingane zasenkulisa
Ungayilungisa kanjani indodakazi ukuze uvakashele ochwepheshe bokubeletha okokuqala?
Ukucindezeleka ngaphambi komshado
I-Crab ibambelela ku-batter
I-salmon ye-Pink emanzini
Ibhande langamanje lokugcizelela ukuma kwamabele
Indlu yokuhlanza indlu yasekhaya
Inhlanhla yonyaka omusha ngonyaka kaBlue Horse
Imithetho yokuziphatha kanye nemigomo yokuziphatha etafuleni
I-bread pudding ne-parsnip
Okusemqoka nokuqukethwe kwemfundo yasekhaya
Izindawo ezibomvu emilenzeni: izimbangela nesithombe
Ungabhukuda kanjani usana?
Izesekeli zamadoda njengesipho esihle kakhulu esithandwayo
Ukuzikhethela empilweni kunzima kakhulu